ဗမာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ရဟန်းသံဃာတော်များကို နောင်ပြောင်နာမည်ဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာချ၊
စစ်တွေ၊၊ ၊၊ ရခိုင်းပြည်နယ်ရှိ ဗမာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ရဟန်းသံဃာတော်များကို သင့်လျော်
သောနာမည်အသုံးအနှုန်းဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရတဲ့အစား “လိမ္မော်သီး“ ဆိုသောနောင်ပြောင်နာမည်ဖြင့်
ခေါ်ဝေါ်နေကြသည် ဟု စစ်တွေရှိရဟန်းတော်တပါးက ပြောပြပါသည်၊
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ဦးဇင်တို.ကို “ ဘုန်းကြီး“ ဟု ခေါ်ရမည့်ဟာကို မခေါ်ဘဲနဲ့ “လိမ္မော်သီး“ ဟု အာဏာပိုင်တွေခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတာဟာ ဦးဇင်တို.သာသနာကို အလွန်အမင်စော်ကားရာရောက်တယ်
ထို.ကဲ့သို.နောင်ပြောင်နာမည်ကို ဘယ်လိုသုံးနှုန်းနေသလဲဆိုတာဥပမာပေးပြောပြရာမှာ “ဘူသီး တောင်မှ စစ်တွေသို.လှေဖြင့်သွားနေတဲ့သံဃာတော်သုံးပါးကိုတွေ.လိုက်ရင် အာဏာပိုင်များက
ရခိုင်းပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာတော်များကို “လိမ္မော်သီး“ ဟု ရည်ညွှန်းပြီးသုံးစွဲရာမှာ စစ်အစိုးရ
ထောက်ကျောပြုထားသော ကြံ.ဖွတ်၊မီးသတ်၊ရဲတပ်ဖွဲ. နှင့်စစ်သည်တော်ဟောင်းများ စသည့်အဖွဲ.အစည်းတွေအကြာ အကျယ်တင့် သုံးစွဲနေသည်ဟုသိရှိရပါသည်၊
ထို.သို.ပြုလုပ်ရခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ.ရင်ထဲမှာ ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုဖျက်စီးဖို.နှင့် တန်ဖိုးအဆင့်အတန်ကို နှိမ်ချဖို. ရည်ရွှယ်လုပ်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရ၏အစီအစဉ်တရပ်
ဖြစ်တယ်လို.မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မှ အရှင်အိန္ဒသက္က ကမိန်.ကြားသွားပါသည်။
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ ဂုဏ်သတင်းတွေကို နည်းပေါင်းစုံဖြင့်ဖျက်စီး
ဖို.ကြိုးစားရာမှာ ရဟန်သံဃာတော်များကိုမိန်းမနဲ.လိင်အင်္ဂါဆက်ဆံသည် ဟူသောစွပ်စွဲချက်မျိုးကို
လဲတခါတလေ လုပ်ကြံသတင်းတွေကို ဖြန်.ခဲ့ဟု သူကဆက်ပြောပါသည်။
ထိုကဲ့သို.အပြုအမှုတွေဟာ သံဃာတော်များ၏ပုံရိပ်တွေကို ပျက်စီးစေရုံတာမကဘဲ ကမ္ဘာတလွှာရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ.ပုံရိပ်တွေကိုလဲပျက်စီးစေပြီး သံဃာတော်တွေအပေါ် ၎င်းကဲ့သို. တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကို ဦးဇင်တို. လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို. အရှင်အိန္ဒသက္က ကဆက်လက်မိန်.ကြားသွားပါသည်၊
ဗမာစစ်အစိုးရအနေနဲ.ရဟန်းသံဃာတော်များအပေါ် အကယ်၍ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓသာသနာပျောက်ကွယ်သွားမည့်အခြေအနေကို ၀ါတော်ကြီးသံဃာတော်များက စိုး ရိမ်နေကြရတဲ့အကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Burmese Authorities Demean Monks with Nickname
Sittwe: Burmese military authorities in Arakan State have been widely referring to monks with the nickname “orange”, rather than using the appropriate term, said one monk from Sittwe.
“The authorities now call us ‘orange’, and no longer officially call us ‘monks’ in Arakan State, and it is an extreme insult to our religion,” the monk said.
He gave as an example of how the nickname is being used by saying that if three monks were to travel from Buthidaung to Sittwe by ferry, the authorities would refer to them as ‘three orange’ traveling to Buthidaung.
Members from many organizations backed by the Burmese military government, such as the USDA, fire service, police, and veteran groups, are now widely using the term orange to refer to monks in Arakan State.
Ashin Inda Shaka from the western Burmese border area said that it is part ofagovernment plan to destroy the monks’ image in Burma, and to devalue their status in the eyes of the Burmese people.
Burmese military authorities have been trying to destroy the reputation of monks in several ways, including sometimes publicizing accusations that monks have sexually abused women, he said.
Such activities not only damage the image of monks, but also the image of Buddhism around the world, and we are unable to accept such attacks on monks by military authorities in Burma, he added.
It has also been learned that many elder monks in Burma are now worried about the state of Buddhism and Buddhists in Burma, as the religion will be threatened with extinction in the future if the government continues to attack monks.
သတင်း။ News, STATEMENT